Global Voices teny Malagasy » Lahatsarin-kira 12 Niavaka Tao Taiwan Tamin’ny 2013 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2014 22:17 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Taiwan (ROC), Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Namoaka tsipalotra  iray ho an'ny seho an-tsehatra tao tamin'ny 2013 ny “Taiwan Music Writing Group”, bilaogy iombonana natao hitsikerana mozika. Indro ny fantina iray ahitàna ny 12 amin'ireo artista sy tarika ireo, arahan'ny lahatsary avy ao amin'ny Youtube.
Ny tena nampiavaka ny sehatry ny mozika tamin'iny taona iny tao Taiwan dia ny fikitihany ny zava-misy, hooy ny nambaran'ilay bilaogy:
Hira maro tsy voatanisa izay maneho ny zava-misy ara-tsosialy ao Taiwan no teraka tao anatin'ireo adihevitra be sy olana ara-politika nisy tao. Sempotry ny fahatsapana alahelo sy ny famoizam-po ireo nosy rehetra tao Taiwan. Anaty mozika ihany mantsy no ahafahan'ireo mpanankato maneho ny heviny[…]
Miaraka amin'ny fisian'ny disadisa eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ara-toekarena any amin'ny faritra Atsinanan'i Taiwan, na dia i Chang Chen-Yue be lalao iny aza mba nampahalala ny fiaviana Amis nipoirany ary nihira hoe: Izaho no Ayal komod [Ayal komod dia anarana Amis  ho an'i Chang Chen-Yues amin'ny fiteny].
Tadidinoareo ilay fety natao indray alina nandritry ilay hetsi-panoherana [manohitra ny nokleary], tamin'io fotoana io no nahenoako voalohany ilay hiran'i Tizzy Bac, “Feel the Pain” (Iaino ny hirifiry). Mazava be ny hafatra ampitain'izy ireo.
Taorian'ny nahazoan'i Lin Sheng-Xiang ny loka rehetra nokendreny, niverina nanao ny gadona folk rock indray izy sy ny tarika. Ny kapilan'izy ireo “I-Village” dia toa taratry ny tantaran'ilay mpanoratra mihitsy,Yung-Feng Chung. Azo vakina ho toy ireny toro-làlana amin'ny fiainana ambanivohitra ireny ilay izy.
Ny “Village Armed Youth” (Tanora mitam-piadian'ny Tanàna) , tarika mpiangaly mozika mafàna fo mirotsaka amin'ny hetsika ara-tsosialy ao Taiwan, dia nanary ny hatezeran'izy ireo. Tao amin'ilay kapila vaovaon'izy ireo, “Where is happiness?”(Aiza ny hasambarana?), feno fanahiana ny hira. Inona no hoavinay ? Toy ny renirano mikoriana ny hoavy, ary tsy hitanao ny fiafarany.
Ankoatran'ireo tarika mpivohy ny gadona rock, feno fahavitrihana ihany koa ny tontolon'ny hip-hop. Amin'ny zoro hafa mihitsy no itantaran'ireo mpanao Rap ny fiarahamonina. Ny “Enemy's Kids” an'ny Softlipa dia mampiseho ireo fianakaviana rava, na izany mahantra na antonontonony. Ny zava-doza toy izany no mihatra amin'ny tanàna. Ny hirany iray hafa “The Unknown Renovation Inside Du Jen-Shi” (Ny Fanavaozana Anatiny Tsy Fantatra Ao Amin'ny Du Jen-Shi) indray dia toa manjavozavo ihany, toy ireny lehilahy miteny irery ao anatinà efitrano nofaina tao an-tanànan'i Taipei rakotry ny orana ireny.
Ny tontolon'ny mozika ny taona 2013 koa dia nahitàna indray ny fiverenan'ireo mpihira ny taona 1980 sy 1990, toa ny Ciacia, izay namoaka kapila vaovao mitondra ny lohateny hoe “She & Me” ( Izy&Izaho).
Sugar Plum Ferry ihany koa dia isan'ny namoaka kapila vaovao, “Hometown of Glitter” (Tanàna Nahaterahan'ny Manjelanjelatra).
Nazaho loka marobe ny kapila vaovaon'i Ming-Yu Hsieh “Tainan” .Tsy ho fahatsapana feno fitsaratsaram-poana intsony no ho renao [momba an'i Tainan], toy ny sakafo matsiro, mpizaha tany, ary Kafe ao Taiwan, fa kosa ny ho renao dia ny vavahady fahagola tsy tontan'ny ela ao an-tanàna, ireo namana taloha, ireo tantara taloha ary ireo fahatsiarovana ny taloha. Toy ireny lehilahy lehibe manembona ireny, ka manitrika ny tongony anaty tany, mihira sy mivavaka eo amin'ny tanin'i Tainan, toerana ahitàna lanitra rakotry ny voninkazo mena midorehitra.
Raha niverina niantsehatra ny antitra, tsy niandry ela koa ny tarehy vaovao dia nipoitra. Tsy nijanona tamin'ny fampiasana ireo zava-maneno efatra mahazatra intsony izy ireo, ary tsy nijanona tamin'ny gadona folk, shoegaze, post-rock, na post-punk fotsiny ny karazan-kiran'izy ireo. Mahavita manafangaro mozika dizitaly ho anaty mozikany ihany koa izy ireo[…] Sonic Deadhorse moa dia efa ela no nanao hira ambany gorodona. Ary nahavoaka ny kapilany ihany izy ireo nony farany. Nahita vokatra tsara teo amin'ireo mpanao fanakianana ny mozika ny seho an-tsehatry ny mozika masiaka.
Manambatra ny mozikany amin'ny alalan'ny ipad ilay mpanankato vao erotrerony Chiu-Pi  ary amin'ny fomba tsotra no hihiràny ilay tantaram-pitiavana “We Must Love (Tsy Maintsy Mitia Isika).”
Ilay kapila voalohany navoakan'i Baobu Badulu “Love Taiban” indray dia mampahatsiahy ny ranomasina. Mambabo aoka izany ny feon-gitara ao aminy.
12. Fred Van Hove sy Shih-Yang Lee
Ny lohany amin'ny safidy mozika jazz ao amin'ilay “Music Writing Group” dia ny “Galactic Alignment: Piano Duo Improvisation” an'i Fred Van Hove sy Shih-Yang Lee .
Misy zavatra bebe kokoa mikasika ireo kapila avy amin'ireo mpanakanto ao Taiwan nivoaka ny taona 2013 ao amin'ilay “Music Writing Group”: (I) , (II) , (III) , (IV) , ary (V) .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/31/56676/
 amin'ny safidy mozika jazz : http://blog.roodo.com/music_writing_group/archives/26409730.html